June 2013 ~ နတ်ရဲ(ရူပဗေဒ)
မာနရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်က နာကျင်ကြေကွဲမှုတွေပဲဆိုတာ နောင်တတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ငါနားလည်ခဲ့ရပြီ မဟော်ရယ်.
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ ၊ ၂၀၁၃.
တောသူတောင်သားတွေရဲ့ဦးနှောက်မှာ အသိပညာဗဟုသုတတွေ နေမင်းကြီးလိုမလင်းနိုင်ရင် တောင်မှ ကြယ်ကလေးတွေလောက်တော့လင်းနိုင် အောင် မိချော ကြိုးစားရမယ်.
အညွန့်တလူလူတက်နေသည့်ဘဝကလေးတွေ ဒီလိုအမှာင်မြစ်ရဲ့ဝဲဂယက်ထဲမှာ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်တောင်များရှိနေခဲ့ပြီလဲ.
1:31 AM နတ်ရဲ (ရူပဗေဒ) 1 comment
“ ဟဲ့ မိအေးဘုံ.. ညည်း အခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့စမ်း”
အိမ်ထဲမှာဟင်းရွက်စည်းနေတုန်း ဒေါ်ဘုမရဲ့အော်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ အေးဘုံ ခြေတွေလက်တွေအပြင် ရင်
ပါတုန်လာတယ်။ စည်းလက်စဟင်းရွက်တွေကိုချထားလိုက်ရင်း ထိုင်ချီထချီဖြစ်နေမိတယ်။
“ ဟဲ့ မိအေးဘုံ၊ ညည်းနားမပင်းပါဘူးနော်၊ ညည်း အိမ်ထဲမှာရှိနေတာငါသိတယ်၊ အခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ ”
ဒေါ်ဘုမရဲ့အသံက ဒုတိယတစ်ကျော့ထွက်လာပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါ အေးဘုံ မနေသာတော့ဘူး။ ဒေါ်ဘုမရဲ့ အကြောင်းကို
အေးဘုံ အသိဆုံး။ ဒီတော့ အိမ်ပြင်ကိုခပ်သွက်သွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
“ ကဲ ပြော၊ ညည်း ကျုပ်ဆီကယူထားတဲ့အကြွေးတွေ ဘယ်တော့ဆပ်မှာလဲ ”
အေးဘုံကိုတွေ့တာနဲ့ ဒေါ်ဘုမက ဇယ်ဆက်သလိုလှမ်းပြောတော့တာပဲ။ အေးဘုံလည်း အကြွေးတွေကျေအောင် ဆပ်ချင်
လှပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကလည်းရောင်းမကောင်း။ အမေ့ရောဂါလည်း တစ်နေ့တစ်ခြားဆိုးဝါးလာလေတော့ ဝင်ငွေထက်
“ တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ စောင့်ပေးပါဦး ဒေါ်ဘုမရယ်၊ ဈေးကရောင်းမကောင်းတော့ လက်ထဲမှာငွေပြတ်နေလို့ပါ ”
“ အမယ်လေး .. ငွေလေးတစ်ပဲခြောက်ပြားကို နေ့ရွှေ့လိုက် ညရွှေ့လိုက်နဲ့၊ အတိုးတွေက အလုံးအရင်းနဲ့တက်လာ ပြီ ”
“ သိပါတယ် ဒေါ်ဘုမရယ်၊ နောက်နေ့ဆို မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှာပေးပါ့မယ်၊ အခု အမေ့ရောဂါကလည်းပိုဆိုးလာတော့ ”
“ တော်ပါတော့အေ.. တကတည်း ညီးပြနေလိုက်တာ ခိုတွေတောင်အရှုံးပေးရမယ်၊ နောက်နေ့ကျ ဆပ်ရင်ဆပ်၊ အေး..
မဆပ်လို့ကတော့ ညည်း ငါ့အကြောင်းသိပါတယ် ”
“ အင်းပါ ဒေါ်ဘုမရယ် ”
ဒေါ်ဘုမထွက်သွားတော့ အေးဘုံ အားပြတ်သလိုထိုင်ချလိုက်မိတယ်။ ပြောသာပြောလိုက်ရပေမယ့် ရင်ထဲလေးနေမိတယ်။
မနက်ဖြန် ဒေါ်ဘုမကို အကြွေးဆပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မသေချာ။ အေးဘုံတစ်ကိုယ်လုံးလည်း အပူလုံးဆို့ပြီး နေမကောင်းချင်
ခဏနေတော့ နှေးဖင့်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အမေကတော့ ဆေးရှိန်နဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်
မောကျနေတယ်။ ဒေါ်ဘုမရဲ့အသံကို အမေ မကြားလိုက်လို့ တော်သေးတယ်။ နာတာရှည်ရောဂါသည် အမေ့ကို သောက
စည်းထားတဲ့ဟင်းရွက်တွေကို ဗန်းပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဟင်းရွက်ဗန်းကိုရွက်ပြီး ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ မနက်ပိုင်း
ထက်စာရင် ညနေပိုင်းက ပိုပြီးအရောင်းသွက်သလိုပဲ။ မနက်ပိုင်းဈေးမသွားတဲ့သူတွေ အေးဘုံကိုစောင့်ပြီးဝယ်ကြတယ်။
“ ဟင်းရွက်စုံရမယ်နော် .. ဟင်းရွက်စုံ .. လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေနော် ”
လမ်းတစ်လျှောက်လုံး အေးဘုံရဲ့ဟင်းရွက်စုံအော်သံလေးက ပြန့်ကျဲသွားတယ်။ အေးဘုံ အလာကိုစောင့်နေကြတဲ့ ဖောက်
“ စောင့်လိုက်ရတာ အေးဘုံရယ်၊ ဒီနေ့ နောက်ကျသလိုပဲ ”
“ ဟုတ်တယ် ဒေါ်ကြီးလှရေ၊ ဒီနေ့ ဟင်းရွက်လိုက်ခူးနေရလို့ကြာသွားတာ၊ ဒီကန်စွန်းရွက်တွေက ရေကန်စွန်းတွေနော်၊
ချိုမှချိုပဲ၊ အခုမှခူးလာတာ ”
“ အမယ်လေး အေးဘုံရယ်၊ ညည်းရောင်းတိုင်း မကောင်းတဲ့အခါများရှိလို့လားဟဲ့ ”
ဒေါ်ကြီးလှရဲ့ စကားကြောင့် အေးဘုံ သွားလေးပေါ်အောင်ရယ်လိုက်မိတယ်။ တကယ်လည်း အေးဘုံရဲ့ဟင်းရွက်တွေက
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ။ အခုခူး အခုရောင်းပဲ။ မနက်က လက်ကျန်တွေမပါဘူး။
“ ကဲ.. ကဲ ချဉ်ပေါင်ရွက်နှစ်စည်းပေး၊ ရုံးပတီသီးနဲ့ ခရမ်းသီးလည်းယူမယ်၊ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းလေးချက်ချင်လို့ ”
“ ရော့ ဒေါ်ကြီးလှ၊ ခရမ်းသီးတစ်လုံးပိုပေးခဲ့တယ်နော် ”
ရောင်းပြီးတာနဲ့ အေးဘုံ ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ရောင်းရတာမဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်။ ဗန်းထဲမှာ ဟင်းရွက် နည်း
နည်းပဲကျန်တော့တယ်။ ဒီဟင်းရွက်လေးကုန်ရင် အမေ့အတွက်ဆေးနည်းနည်းဝယ်သွားရမယ်။
“ ဟင်းရွက်စုံရမယ်နော် .. ဟင်းရွက်စုံ ”
“ ဟေ့ကလေးမ .. လာပါဦးကွဲ့ ”
အေးဘုံကိုခေါ်လိုက်တဲ့ အဘိုးကြီးဆီကိုလျှောက်လာခဲ့တယ်။ အဘိုးကြီးက အကျီအဖြူလက်ရှည်နဲ့ လုံချည်ကို သေသေ
သပ်သပ်ဝတ်ထားတယ်။ လက်ထဲမှာလည်း စိပ်ပုတီးနဲ့။ တော်တော်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့လူကြီးလို့ အေးဘုံ တွေးလိုက်
“ ဟင်းရွက်တွေက ဒီလောက်ပဲလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့ .. ဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ် ဘကြီး ”
“ ဒီကန်စွန်းရွက်တစ်စည်းဘယ်လောက်လဲ ”
“ တစ်ရာပါရှင့် ”
“ တစ်ရာဟုတ်လား၊ ဈေးကြီးလှချည်လား၊ တစ်စည်းမှ ငါးဆယ်တည်းပါ ”
“ ငါးဆယ်မရပါဘူး ဘကြီးရယ်၊ ကျန်နေတဲ့ငါးစည်းလုံးယူရင်တော့ လေးရာနဲ့ပေးလိုက်ပါ့မယ် ”
“ ကဲပါ .. ငါးစည်းလုံးယူပါ့မယ်၊ သုံးရာပဲထားလိုက်၊ ဟုတ်ပြီလား၊ ဘကြီးက ဥပုဒ်စောင့်နေလို့ သတ်သတ်လွတ်ချက်စားမှာ၊
“ ဟုတ်ကဲ့..ပေးလိုက်ပါ့မယ် ”
“ အေးကွယ် .. သာဓု သာဓု သာဓု ”
အေးဘုံ ရင်ထဲကြည်နူးသွားမိတယ်။ မလှူနိုင်မတန်းနိုင်တဲ့ အေးဘုံအတွက် ဒီလောက်လေးနဲ့ကို ပီတိဖြစ်လို့ မဆုံးဘူး။
အဘိုးကြီးက ငွေသုံးရာကိုထုတ်ပေးပြီး တိုက်ကြီးထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ ဟင်းရွက်တွေ အကုန်ရောင်းလို့ကုန်ပြီမို့ အေးဘုံ
ညဆယ်နာရီမို့ အမှောင်ထုက ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးကိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အေးဘုံ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတော့
တိတ်ဆိတ်မှုတို့ဆိတ်သုဉ်းလို့နေတယ်။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်မီးရောင်စုံတွေအကြား ခပ်ကြမ်းကြမ်းသံစဉ်တွေနဲ့ အတူ ခန္ဓာကိုယ်
တစ်ခုလုံးပြုတ်ထွက်သွားမတတ် ခုန်ပေါက်နေတဲ့လူတွေ။ သားကောင်တွေ မုဆိုးတွေပေါတဲ့နေရာကို အေးဘုံ ရောက်နေ
တယ်။ ဒီနေရာ ဒီဌာနေက လျင်သူစားတဲ့နေရာ။ ကိုယ်ညံ့ရင် ကိုယ်ခံ။ မုဆိုးတွေရဲ့ထောင်ချောက်ရှိသလို သားကောင်
ဒီနေရာက အေးဘုံနဲ့စိမ်းသက်လွန်းလှတယ်။ အကြပ်အတည်းတစ်ခုကြောင့် ဒီနေရာကို အေးဘုံ ရောက်လာခဲ့တာ။ အေးဘုံ
ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာလည်း အေးဘုံနဲ့တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေတဲ့ စိန်စိန်ကြောင့်။ စိန်စိန်က ဒီလိုနေရာတွေနဲ့စိမ်းလှတာ
မဟုတ်ဘူး။ အေးဘုံသာ ဒီလိုနေရာမျိုးကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးတာ။ သီချင်းသံတွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပျံ့လွင့်နေတာ ကမ္ဘာ
အေးဘုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုယ်ကြပ်လည်ဟိုက်အင်္ကျီနဲ့ ပေါင်လယ်လောက်သာရှိတဲ့ နောက်ခွဲစကဒ်က နေရာယူထားတယ်။
ရိုဖရဲချထားတဲ့ ဆံပင်။ ကာလာစုံတင်ထားတဲ့ မျက်နှာ။ အားလုံးက ပုရိသတို့ အသက်ရှူမှားလောက်အောင်ဆွဲညှို့လို့နေ
တယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုးရအောင် စိန်စိန်ပဲ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာလေ။ ဒီလိုဝတ်စားရတာ အေးဘုံ မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြစ်နေ
“ အေးဘုံရေ .. နင့်ကို နံပါတ်ကိုးဝိုင်းက ခေါ်နေတယ်၊ ဒီညတော့ နင်ထောပြီ၊ ရေလျှံနေတဲ့ ကြောင်အိုကြီးပဲ၊ နင် ကိုယ်တွယ်
ရလွယ်မှာပါ၊ ဒါနဲ့ နင့်နာမည်က ဒေလီယာနော်၊ အေးဘုံလို့မပြောမိစေနဲ့ ”
စိန်စိန်ရဲ့စကားကြောင့် အေးဘုံ ရင်တုန်သွားရတယ်။ အေးဘုံ နာမည်က ဒေလီယာတဲ့။ စိန်စိန်ကလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာသာ
စိန်စိန်ပါ။ ဒီမှာကျတော့ နှင်းဆီဝိုင်တဲ့။ နံပါတ်ကိုးဝိုင်းကို အေးဘုံ လျှောက်လာခဲ့တယ်။ နံပါတ်ကိုးဝိုင်းကို ရောက်တော့
အေးဘုံ နှာခေါင်းကိုမသိမသာရှုံ့လိုက်မိတယ်။ ကြည့်ပါဦးလေ။ ခြောက်ဆယ်ကျော် အရွယ်အဘိုးကြီးက လူငယ်လေးလို
ရှုပ်ယှက်ခတ်နေအောင်ဝတ်ထားလို့။ ခါးပတ်အပေါ်မှာ စူထွက်နေတဲ့ ဗိုက်ကြီးကလည်း ကောက်ညှင်းထုပ်ကြီးလို။ ဒီကြား
ထဲ မွှန်ထူတဲ့ရေမွှေးနံ့ကလည်း နှာခေါင်းထဲ အလုံးလိုက်ဝင်လာသေးတယ်။ အဘိုးကြီးရဲ့အရက်ခိုးဝေနေတဲ့မျက်လုံးတွေက
အေးဘုံ ဆီကိုအဆက်မပြတ်ဝေ့ဝဲလို့။ နွားအိုမြက်နုကြိုက်တယ်လို့ပြောရမလားပဲ။
“ ကိုကြီး .. ဒေလီ့ကိုခေါ်တယ်ဆို ”
စိန်စိန်သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း အေးဘုံပြောလိုက်တယ်။ အေးဘုံရဲ့ ခရာတာတာအသံလေးက နွဲ့နွဲ့လေး။ အံမယ် ကိုကြီးလို့
ခေါ်လိုက်လို့ထင်ပါရဲ့။ ထူထဲနေတဲ့နှုတ်ခမ်းထော်ကြီးကပြုံးသွားလိုက်တာ နွားပြာကြီး အောက်သွားမရှိသလိုပဲ။
“နာမည်ကဒေလီတဲ့လား၊ အသစ်လေးထင်တယ်၊ အရမ်းမိုက်တာပဲကွာ၊ လူကနာမည်ထက်တောင်ပိုမိုက်သေးတယ်”
အလဲ့ .. အဘိုးကြီးကလည်း မခေပါလား။ မိန်းမ ကျမ်းကြေနေတဲ့ပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ အေးဘုံ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ အဘိုးကြီး ဝတ်
ထားတဲ့ ဟန်းချိန်းကြီးက ဘယ်နှကျပ်သားလောက်ရှိမလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ အဘိုးကြီး
ရဲ့ဖောင်းပွနေတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ငွေတွေကို အေးဘုံကြည့်နေမိခဲ့တယ်။
“ ရော့ .. ကိုကြီးအတွက် ”
“ အိုကေ .. ဒါက အလိုက်သိတဲ့မိန်းမလှလေးအတွက် ”
အေးဘုံ အရက်ငှဲ့ပေးပြီးအနားမှာထိုင်လိုက်တော့ အဘိုးကြီးသဘောကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ အိတ်ထဲ
ကနေ ငွေတစ်ထပ်ယူပြီးလှမ်းပေးတယ်။ ဒီကလည်း အေးဘုံ ပဲလေ။ စိန်စိန်သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ငွေတစ်ထပ်ကို ယူ
သလိုလိုနဲ့ အဘိုးကြီးရဲ့ လက်ကို မထိတထိလေးလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။
အံမယ် .. အဘိုးကြီးက ချက်ဆို နားရွက်ကမီးတောက်ပြီးသားပဲ။ အေးဘုံရဲ့ပခုံးလေးကိုရဲရဲတင်းတင်းပဲလှမ်းဖက်တယ်။
အေးဘုံလည်း ဖန်ခွက်ထဲကိုအရက်အပြည့်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်။ အဘိုးကြီးကအရက်ကိုတစ်ကျိုက်တည်းမော့သောက်
လိုက်တယ်။ ရေချိန်နည်းနည်းကိုက်လာတော့ အဘိုးကြီးရဲ့ပါးစပ်တွေ လက်တွေသွက်သထက်သွက်လာတယ်။ အဘိုးကြီးရဲ့
နောက်တော့ အဘိုးကြီးမှောက်သွားတော့တယ်။ အဘိုးကြီးရဲ့လက်ကတော့ အေးဘုံရဲ့ပခုံးကိုဖက်ထားဆဲပဲ။ အေးဘုံ ထရပ်
လိုက်တော့ အဘိုးကြီးရဲ့လက်က ဗုန်းခနဲပြုတ်ကျသွားတယ်။ အဘိုးကြီးကတော့ အရက်ရှိန်ကြောင့် လော ကြီးနဲ့ အဆက်
သွယ်ပြတ်နေလေရဲ့။ လက်ထဲကငွေတွေကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ရင်း အေးဘုံ လှည့်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
အခု အေးဘုံ ကျေနပ်လောက်တဲ့ငွေရပြီ။ အဘိုးကြီးကတော့ ဘာမှမသိပဲ အရက်ရှိန်တက်လို့ ကောင်းတုန်းဖြစ်မှာပေါ့။
တကယ်တော့ အေးဘုံ ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပါဘူး။ အကျပ်အတည်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် အေးဘုံ အရဲစွန့်လိုက်ရတာ။
နောက်တစ်ခါ အေးဘုံ ဒီလိုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီလို စားနေကျကြောင်အိုကြီးတွေဆီက ငွေကိုယူလို့
လည်း အပြစ်မရှိဘူးလို့ အေးဘုံထင်မိတယ်။ ဒီငွေတွေက အဘိုးကြီးကို အရက်ငှဲ့ပေးတဲ့အတွက် ရတဲ့ငွေကြေးလို့ပဲ အေးဘုံ
သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မုဆိုးဟာ သားကောင်ဖြစ်တတ်သလို သားကောင်ဟာလည်း မုဆိုးဖြစ်နေတတ်တာကို
အဘိုးကြီး သတိရလာရင် ကောင်းကောင်းနားလည်သွားမှာသေချာတယ်။
“ ဟေ့ လာပါဦး ”
ခေါ်သံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လက်ထဲမှာ ပုတီးကိုင်ထားတဲ့အဘိုးကြီးတစ်ယောက်။ မနေ့ကဝယ်တဲ့ အဘိုးကြီးပါပဲ
လား။ အနားကိုရောက်တော့ အဘိုးကြီးကလှမ်းမေးတယ်။
“ ဘာတွေပါလဲ ”
“ အစုံပဲ ဘကြီး၊ ချဉ်ပေါင်ကလည်းအခုမှခူးတာ၊ ကန်စွန်းရွက်လည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပဲ၊ ဒီနေ့အသီးအရွက်တွေ
“ ကန်စွန်းရွက်တစ်စည်းဘယ်လောက်လဲ ”
“တစ်ရာပါရှင့်၊ ဘကြီးက သတ်သတ်လွတ်စားမလို့ထင်တယ်၊ အေးဘုံကုသိုလ်ရအောင် ငါးစည်းလေးရာနဲ့ပေးပါ့မယ်နော်”
“ ငါးစည်းသုံးရာထားပါ ကလေးမရယ် ”
“ မရလို့ပါ ဘကြီးရယ်”
“ ကဲ ဒါဆိုလည်းခြောက်စည်းလေးရာထားလိုက်၊ အဘလည်းဝ ကလေးမလည်း ကုသိုလ်ရတာပေါ့ ”
“ ယူလိုက်လေ ဘကြီး၊ ဘကြီးမို့ပေးတာနော်၊ တခြားလူတွေဆို တစ်စည်းတစ်ရာပဲ ”
“ အေးပါကွယ် .. သာဓု .. သာဓု သာဓု ”
အဘိုးကြီးက ဝမ်းသာအားရသာဓုခေါ်ရှာတယ်။ အေးဘုံလည်းကျသင့်ငွေလေးရာကိုယူပြီး ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ အဲဒီ
အဘိုးကြီးကို အေးဘုံကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ အခုတော့ သူတော်ကောင်းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်
လိုနေပေမယ့် အဘိုးကြီးရဲ့ဘီလူးမျက်နှာဖုံးကိုအေးဘုံမှတ်မိတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ သက်သတ်လွတ်စားတယ်ဆိုတဲ့ အဘိုးကြီး
က ညဘက်ဆို နိုက်ကလပ်တွေမှာ ရိက္ခာယူနေခဲ့တာ အေးဘုံကိုယ်တွေ့ပဲလေ။ အဘိုးကြီးကတော့ အေးဘုံကို မှတ်မိတဲ့ပုံ
အခုချိန်မှာငွေတစ်ရာ နှစ်ရာကို တွက်ကပ်နေတဲ့အဘိုးကြီးက နိုက်ကလပ်တွေမှာငွေကိုရေလိုသုံးပြီးနေနိုင်လိမ့်မယ်လို့
ဘယ်သူထင်မိလိမ့်မလဲ။ လက်ထဲမှာပုတီးကိုင်ပြီး သတ်သတ်လွတ်စားတယ်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့အဘိုးကြီးက ကြောင်သူ
တော် ကြွက်သူခိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောပြရင် ဘယ်သူယုံကြမလဲ။ မကြောင်းမသင့်ရင် ပြောတဲ့သူကိုတောင် အရူးလို့
အပြောခံရမှာ သေချာတယ်။ အေးဘုံကတော့ ပြောမယုံလည်း ကြုံဖူးလို့ သိခဲ့ရပြီ။ ချွေးသံတရွဲရွဲနဲ့ ရပ်ကွက်တကာလှည့်ပြီး
ဟင်းရွက်ရောင်းနေတဲ့ အေးဘုံကိုရော ညကနိုက်ကလပ်မှာသားကောင်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဒေလီယာပါလို့ လက်ညှိုးထိုးပြောရင်တောင်
ထုံးစံအတိုင်း အေးဘုံရဲ့ဟင်းရွက်စုံအော်သံလေးက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတော့တယ်။
ရွှေ့အမြုတေမဂ္ဂဇင်း ၊ ဇွန်လ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။
ဒီနေ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်ကလေးတွေမရှိဘူးဖေဖေ။ အခုချိန် ဖေဖေသာအနားမှာရှိရင် ကြယ်ကလေးတွေ တူတူပုန်းကစားနေတယ်လို့ပြောဦးမယ်ထင်တယ်နော်။ သမီ...
(၁) ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ်အဖြေရှာမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို တစ်ခြားသူတွေဆီမှာပ...
ကျွန်မနာမည်က အိုအို။ ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဆိုပြီး နှာခေါင်းရှုံ့သွားကြတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်မလည်း ဒီနာမည်ကို မကြိုက်ပါဘူး။ အဖေနဲ့ အမေက အိုအို လိ...
(၁) အမယ်လေး ..လင်ယူရတာများ ဒုက္ခတယ်ကြီးပါလားနော်။ ဒါတောင်တစ်ယောက်တည်းယူထား...
(၁) “ အမယ်လေးဟယ် .. မြို့ကြီးပြကြီးဆိုတာများ တကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတာဟဲ့၊ မြင်သမျှတွေ့သမျှ အားလုံး သဘောကျပဲ ” မိချောက သူ့ရှေ့မှာ...
နင် ရူးနေပြီ မြသွေး တဲ့။ ထိုစကားတစ်ခွန်းက နားထဲသို့ခပ်ပြင်းပြင်းတိုးဝင်လာ၏။ မြသွေး ရူးနေပြီတဲ့။ မြသွေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိ...
(၁) ဆောင်းရာသီ၏မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် လူ့လောကအတွင်းသို့ သူမ စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို နေ့က နှင်းများ ဖွေးဖွေးလှုပ်ကျဆင်းလို့နေ...
ခေတ္တပေါ်ကဗျာ - မသာတော်နေ့များ =========== သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ တွေဆိုရင် ပရိနိမ္ဗာန်ပြုတယ် ရဟန္တာများကျတော့ ခန္ဓာဝန်ချတယ် အချို့ ကတော့ပရိနိမ္ဗာန်ပြုတယ်လို့ပဲသုံးတယ် ...
ထန်းလက်တဲမိုးတဲ့နေ့ - နှောင်းနွေအခါ ၀ဠာက မိုးတွေ ညို့လျှင်ဖြင့် ပေါင်းဆွေသဟာ လာကြ အမိုးတွေ တို့ပြင်စို့ရဲ့ ဖိုးခင်တို့တဲရယ်နဲ့ နွားစာခြံ ၊ (အိုကွယ်..) မိုးစင်လို့ ရွှဲလျှင်ဖြင်...
ကော်ဖီခွက်ပေါ်ရွာသော ပဋိပက္ခမိုး၏ ချစ်သူ - အိပ်ငိုက်နေရက်နှင့် ရုတ်တရက်လန့်နိုးသွားရသည်။ နားထဲသို့ တိုက်ရိုက်ကြီးဝင်လာသော အသံကြောင့်ဆိုခြင်းထက် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို မပီဝိုးဝါးကြားလိုက်ရခြင်းကြေ...
ကမ္ဘာကြီးဆိုတဲ့ မပီမသကိစ္စကို လူသားအမြင်သက်သက်အရ မပီမသ - ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ကား ဖရိုဖရဲ မပီမသ အချစ်ကျေးကျွန်များ ဆေးသားစုတ်ချက် အိပ်မောကျ သွေးစုပ်ခံရသူလို မပီမသ စိတ်ရှည်လက်ရှည် အာခေါင်ကွဲနေတာ ရှိရင် အော့အန်ရင် သေရတော့မယ...
အခွဲအခွာ - ဆောင်းနှောင်းခဲ့ပြီ။ ကချင်ပြည်နယ်၏ ချမ်းမြသော ဆောင်းရာသီက နှင်းကြွင်းပင် မကျန်တော့အောင် နှုတ်ဆက်ပြီ။ နွေဦးသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်တော့မည့် အရိပ်အယောင်များ မြ...
ငမိုးရိပ်အ၀င်နှစ်ဖာလုံ - (၁) 'လူတစ်ဦး ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေ' တဲ့။ လူတွေကြားမှာ သုံးနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုပါပဲ။ ကျုပ်က လူမဟုတ်တော့ အဲ့ဒီစကားက ကျုပ်နဲ့မဆိုင်လှပါ ဘူး။ မဆိုင်ဆိုရင်လည်း အစကကု...
တံခါးခေါက်သံများ ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု -
၀တ္ထုကောင်း တစ်ပုဒ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် အကာလမရဏ - (က) ၀တ္ထုကောင်း တစ်ပုဒ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အဲဒီ ၀တ္ထုမှာ ပါဝင်တဲ့ အဓိကဇာတ် ကောင်များ အပေါ် စာဖတ် ပရိသတ်က အာရုံ အပြည့်အ၀ ခံစားမှု ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ...
စမ်းချောင်း အင်းစိန် ဟားဗတ် (၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) -
ဆုံမှတ်ဘယ်ဆီ - ၁။ တောင်ဇလပ် ပန်းတွေ မင်းမူနေသည့် ဒေသ တစ်ခုဆီမှာ ပုစွန်ဆီရောင် ကောင်းကင် တစ်ခု ခြယ်သ ထားခဲ့သည်။ တိမ်သားထုတွေသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာ၊ ထို့နောက် နိမ့်ရာမှ မြင...
“မြေနီည” - ၁။ “ဖူး”ခနဲ မှုတ်ထုတ် လိုက်သည့် ဆေးလိပ် မီးခိုးငွေ့ များကို လှဦး လိုက်ကြည့်မိသည်။ ပြီးတော့... “မင်း ပြောတာက တကယ် ကျိန်းသေပါတယ် နော်” “ဂလု...ဟွန်း... မင...
အမြုတေရတနာများ - *မြန်မာဓလေ့စရိုက်တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအတွေးအခေါ် တို့ရဲ့ အမြုတေရတနာများ* လူသားတွေဟာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေထိုင်လေ့ရှိကြတာက သဘာဝတရားတစ်ခုပါ။ လောကကြီးရဲ...
Copyright © 2011 နတ်ရဲ(ရူပဗေဒ) | Powered by Blogger